कैलाली घटनामा उठ्यो प्रहरी माथि नै यस्ता गम्भिर प्रश्न, उनीहरुलाइ बचाउन प्रहरीको अर्को टोली किन गएन ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कैलाली घटनामा उठ्यो प्रहरी माथि नै यस्ता गम्भिर प्रश्न, उनीहरुलाइ बचाउन प्रहरीको अर्को टोली किन गएन ?
काठमाडौ । कैलालीमा प्रहरीका असइ गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउदको निधनको घटनाले केही आशंका उब्जाएको छ। प्रहरीले केराउ (मटर) का मुख्य त स्क रलाई पक्राउ गरेको छैन। पक्राउपछि सार्वजनिक गरिएका सात जना अधिकांश भरिया मात्रै पाइएको छ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रतीक विष्ट शनिबार राति १० देखि ११ बजेको बीचमा असइ विक र जवान साउदको ज्यान गएको अनुमान गर्छन्। दुवै जना राति १० बजेदेखि नै सम्पर्कविहीन भएका थिए। तर, त्यसबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आइतबार बिहान १० बजे मात्रै खबर गरिएको थियो। माथिल्लो निकायमा समयमै किन खबर गरिएन ?
सीमा नाकामा हुने चोरी त स्क’री र गि रोह स’मा’त्न जाने क्रममा स्थानीय कमान्डरले माथिको कमान्डरलाई जानकारी वा सूचना दिने फोर्सको ‘चेन अफ कमान्ड’भित्रै पर्छ। त्यसो हो भने ब्याक फोर्स किन गएन ?
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******